Mbadamba onyinye inye onyinye na ụbọchị Valentine | Gam akporosis
Mbadamba onyinye inye onyinye na ụbọchị Valentine
Ụlọ Ignatius | | Ngwa gam akporo, Mbadamba gam akporo
Sọnde na-esote bụ ụbọchị ịhụnanya, ụbọchị zuru oke maka eme ụfọdụ nke ochie ngwaọrụ na anyị nwere n'ụlọ anyị, ma ọ bụ mbadamba, telivishọn, smartphone ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla, kọmputa ma ọ bụ na ọ bụghị, nke na-abịa na njedebe.
N'ịbụ teknụzụ teknụzụ metụtara usoro okike gam akporo, anyị agaghị ekwu maka arịa ma ọ bụ ihe ịchọ mma, mana ngwaọrụ eletrọnị, ọkachasị n'isiokwu a anyị ga-ekwu maka ihe bụ mbadamba nkume kacha mma inye on Valentpo Day.
Dabere na ihe mmefu ego anyị bụ, mmefu ego nke anyị ga-adabere na mkpa anyị, anyị ga-amarịrị nke ahụ Amazon na-enye anyị ohere ị nweta ego ịzụrụ ihe ruru ụgwọ ọnwa anọ, ego nke dị maka ego 75 ruo 1.000, dabere na ọnọdụ nke Cofidis, yabụ anyị nwere ike iji ego a họrọ maka ụdị nke ga-adị anyị afọ ole na ole.
1.2 Ihe nkwalite
2 Galaxy Tab S7 na S7 +
7 Nke a bụ Huawei MediaPad Pro
Tupu anyị ahọrọ ìsì, anyị ga-eburu n'uche usoro nke ga-aka n'ọdịnihu nke nlereanya anyị họọrọ.
Ọ bụrụ na anyị ga-eji mbadamba nkume mee ihe rie ọdịnaya nke ọdịnaya, ọ kachasị mma ịhọrọ ụdị 10-inch. Mana ọ bụrụ na ebumnuche anyị bụ ịkpọtụrụ netwọkụ mmekọrịta, lelee vidiyo na-adịghị mma, zaghachi ozi ịntanetị ... na mbadamba 8-inch anyị nwere karịa ezu.
Samsung bụ naanị ụlọ ọrụ na-emelite ngwaọrụ ọ na-ebupụta na ahịa, yabụ ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ gị n'enweghị ozi ọma ga-abịa na na-abịa nsụgharị nke gam akporo, ị kwesịrị ichebara ụdị dị iche iche nke onye nrụpụta a na-enye anyị echiche.
Ọ bụrụ na ịmasị ise, ma ịchọrọ ị nweta ọtụtụ uru na mbadamba ụrọ gị, ị ga-enye ụdị ndị ahụ ha iwekota onu. Buru n'uche na mkpịsị ekike iji rụọ ọrụ na mbadamba nkume abụghị otu ihe dị mfe nke na-arụ ọrụ na ntanetị aka (m na-ekwukwa nke a site na ahụmịhe m).
Ọ bụ ezie na ngwaahịa niile anyị nwere ike ịzụta na Amazon na-enye anyị 2 afọ akwụkwọ ikikeỌ bụrụ na ọ bụ maka mbadamba ihe sitere na Eshia (ọ bụghị iji mebie ha mana ọ bụ eziokwu), ọ ga-eju anyị anya ma ọ bụrụ na ọ daa, ebe ọ bụ na usoro mmezi ahụ nwere ike iwe ogologo oge karịa ka a tụrụ anya ya.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na iko ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị na ya agbaji, o yikarịrị ka ọ ga-adị enweghi ike idozi ya a manyere anyị ịtụfu ya. Iji zere ụdị nsogbu a, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ ịzụta mbadamba ọnụ yana mkpuchi yana na ha abụọ anaghị ekewa. Ma ọ bụ wepụ mkpuchi nke Amazon na-enye anyị.
Galaxy Tab S7 na S7 +
na Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7 + Ha bụ mbadamba kacha nso ụlọ ọrụ Korea wepụtara na ahịa. Modelsdị abụọ ahụ obere o ha enweghị ihe ọ bụla ga-emere iPad Pro, Ebe ọ bụ na ọ na-ejikọta nkwado maka S-Pen (gụnyere na igbe ahụ) na mgbakwunye na inye nkwado maka keyboard na trackpad (rere ya iche) nke anyị nwere ike ịtụgharị mbadamba nkume anyị na kọmputa maka iji.
The Galaxy Tab S7 na-enye anyị ihuenyo 11 sentimita asatọ na 120 Hz nke soda, 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa (enwere ụdị nke nwere 8 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa).
Ọ na - ejikọ 8-core processor nke anyị nwere ike dezie vidiyo ma nwee egwuregwu kacha ike na-enweghị nsogbu ọ bụla. Batrị ruru 8.000 mAh. Na azụ anyị hụrụ igwefoto igwe 13 MP yana akụkụ 5 MP n'obosara yana ọkụ. Igwefoto n'ihu bụ 8MP.
La Galaxy Tab S7 dị maka euro 650 na Amazon.
The Galaxy Tab S7 na-enye anyị a Ihuenyo 12,4-anụ ọhịa na 120 Hz ume, 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa (enwere ụdị nke nwere 8 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa).
A na-achịkwa ya site na a 8 isi ihe nhazi na batrị nke ruru 8.000 mAh. Na azụ anyị hụrụ igwefoto igwe 13 MP yana akụkụ 5 MP n'obosara yana ọkụ. Igwefoto n'ihu bụ 8MP.
Ọnụahịa nke Galaxy Tab S7 + ruru euro 775 na Amazon.
Uzo ozo dakọtara na Samsung S-Pen bu Galaxy Tab S6 Lite, otu ntụgharị ụdị nke Galaxy Tab S6 na ihuenyo 10.4-inch, 4 GB nke Ram na 64/128 GB nke nchekwa. Ihe nlere 8-core processor na-ejikwa ihe nlere a, nwere kamera azu nke 8 MP na kamera 5 MP n’ihu.
Ọnụahịa nke Galaxy S6 Lite na Amazon bụ euro 339.
Na obere oge na ahịa karịa Lite version, anyị na-ahụ Galaxy Tab S6, mbadamba bukwa dakọtara na S Pen site na Samsung, ọ na-enye anyị 6 GB nchekwa na 8-core Snapdragon 855 processor, ọ bụ ezie na ọ dịkwa na ụdị nwere 8 GB nke RAM na 256 GB nchekwa.
Ihe nlereanya a nwere a 10,5 anụ ọhịa ahụ, Igwefoto azụ 13 MP na 8 MP n'ihu igwefoto. Batrị ahụ ruru 7.040 mAh, na-etinye ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo na ndị okwu AKG.
La Galaxy Tab S6 dị na Amazon maka euro 660.
Otu nhọrọ n'etiti etiti Tab S6 na Galaxy Tab S4 bụ Galaxy Tab S5e, mbadamba na Ihuenyo 10.5-inch, 4/6 GB nke Ram, 64/128 GB nke nchekwa na nhazi 8-core. Ọ dakọghị na S Pen, mana ọ bụrụ na anyị na-achọ ike na ọnụ ala dị ala ma anyị achọghị ụdị ntinye, ụdị a zuru oke.
La Galaxy Tab S5e dị na Amazon maka euro 385.
Ebe ntinye dị na mbadamba Samsung dị na usoro Tab A, nso ebe anyị nwere ike ịchọta ụdị nke 10.4 sentimita asatọ ọzọ sentimita asatọ. Emelitere ụdị abụọ ahụ na gam akporo 10 ma bụrụ nhọrọ dị mma iji lelee ọdịnaya ọrụ gụgharia, lelee email, netwọkụ mmekọrịta ...
Ọnụahịa nke Galaxy Tab A 7 bụ euro 193 na nke Tab A 8.0 bụ euro 159.
Nke a bụ Huawei MediaPad Pro
Ọ bụ ezie na enweghị ọrụ Google (nke enwere ike itinye ya na enweghị nsogbu), anyị na-ahụ Huawei MediaPad Pro, mbadamba ụrọ nke 10,8 sentimita na IPS panel, mkpebi FullHD, Kirin 990 processor, 6 GB nke RAM na 128 GB nke nchekwa.
Batrị ruru 7.250 mAh nke na-enye anyị nnwere onwe nke ihe dị ka awa iri na abụọ na-egwu vidiyo na mpaghara. Ọ gụnyere Huawei M-Pencil, nke anyị nwere ike ịdọrọ na ihuenyo ahụ na mgbakwunye na ijikwa ọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
La A na-akwụ ụgwọ Huawei MediaPad Pro na euro 479 na Amazon.
Si ị chọghị imefu nnukwu ego na mbadamba, MediaPad T5 (ya na ọrụ Google) bu oke nma. Ọ nwere ihuenyo 10.1 nke anụ ọhịa na-esonyere 3 GB nke RAM na 32 GB RAM, ihe karịrị iji nweta ọ streamingụ vidiyo vidiyo, email, netwọkụ mmekọrịta ...
Ọnụahịa nke Huawei MediaPad T5 bụ euro 189 na Amazon.
Ọzọ nke akụ na ụba nhọrọ anyị na-ahụ na ahịa nke mbadamba bụ Lenovo M10, a mbadamba na a 10.3 anụ ọhịa ahụ, nke MediaTek's Helio P22T processor, 4 GB nke RAM na 64 GB nke ebe nchekwa nwere ike ịgbasa ruo 256 GB. Bụ dị na Amazon maka naanị 199 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba onyinye inye onyinye na ụbọchị Valentine